La dagaalanka Musuqmaasuqa & Hadallada Iska Dhehda Ah Masaafo Dheer Ayaa U Dhexeysa – Kalfadhi
Waxaan soo dhoweynayaa mashruuc kasta oo si dhab ah loogula dagaalamayo musuqa heer kasta & nooc walba ee uu leeyahay gaar ahaan kan mu’assasaadka dawladda ka dhex-jira, ee hortaagan in tallaabooyin horumarineed horey loo qaado. Waxaanan marnaba daawo u arkin hadallo iska tuur ah Iyo ficilooyinka is-tustuska u badan ee musuqmaasuqa naaxey korka loogu salaaxayo.
Sheekada musuqmaasuq la dirirka ee maalmahaan danbe Muqdisho ka socotay markaan si hoose ugu dhabba-galay, wax aan ku fasiro waa waayey anigoo la aqrinayey dhacdooyinkii is xigxigay ee siyaasadda dalka la soo gudboonaatey muddadii sanadka Iyo barka u danbeysay Iyo waqtigii doorashadaba oo mid walba dariiqa loo marayaa ay aheyd lacago laaluush ah iyo sharci-ku tumasho. Waxaa igu soo dhacdey qiso Wasiir Yemen-ni ah uu hadda ka hor iiga sheekeeyey, mawduuc la xiriira hubka qabiilooyinka Yemen gacmahooda ku jira oo dhib badan lagala kulmi jirey ayaa madaxweynihii la diley AUN Cali Cabdalla Saalax go’aan ka soo saaray ah in la aruuriyo hubka, lagana billaabo waddooyinka gaadiidku isticmaalo in ciidamada qaranku ay dhigaan jidgooyooyin, lana baaro dhammaan gaadiidka iyo dadka saaran, wixii hub oo ay wataanna laga qaado..
Ciidamadii ayagoo amarka madaxweynaha fulinaya ayey dhammaan jidadkii dalka oo dhan dhigeen ciidamo fara badan kuwaasoo baaraya gaadiidka, waxaa ugu darnaa markii 5 beebe Iyo laba Taangi oo kolonya ah oo qabiillo leedahay uu jid ka mid ah kuwii ciidamada wax baarayey ay joogeen uu soo marey, waa la istaajiyey wadayaashii gawaaridaas gaashaaaman waxaa lagu armray in ay albaabada Iyo daaqadaha furaan si looga dhex baaro Qoryo, bistoolado iyo bambooyin, waxba waa laga waayey sidii ayaana lagu sii daayey.
Musuqmaasuqa waayadan danbe khudbadaha madaxda ku soo noqnoqdey Iyo baaritaannada la sameynayo, sow uma eka Kaare Iyo Beebe laga dhex-baarayo bistoolado?
Nadaafaddu waa in ay ka soo bilaabataa xafiisyada waaweyn, iyo dadka xilalka waaweyn haya, markaas ayaa ratiga danbe kan hore saanqaadkiisa yeelanayaa.
Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka